ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ရေသားတဲ့ နောက်ကြည့်မှန် ဝတ္ထု..။
စာပေသည် နိုင်ငံရေး၏ သြဇာခံမဟုတ်။ တစုံတရာကို ထောက်ခံရန်၊ သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်ရန်သည် စာပေအနုပညာ၏ ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပေ။ စာပေသည် အနုပညာပစ္စည်းဖြစ်ကာ ယဉ်ကျေးမှုကိစ္ခဖြစ်
သည်။ သို့သော် စာပေသည် ထိုစာပေကို ဖန်တီးသူ နေထိုင်ဖြတ်သန်း ရသောခေတ်၏ အလင်းအမှောင်၊ အဆိုးအကောင်း တို့ကိုမူ ထင်ဟပ် ဖော်ပြလေသည်။
အနုပညာဖန်တီးသူ၊စာရေးသူတို့သည်လောကထဲမှအလှတရားကိုကြိုးစားဖော်ထုတ်ကြသည်။မှန်ကန်စွာ ယုံကြည်မှုနှင့် လူသား၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် ကမ္ဘာလောကကို လှပစေသောတရား၊ သစ္စာမည်ပါသည်။
သို့ကြောင့်ပင် စာပေအနုပညာဟူသည် လောကအလှတရားနှင့်ယှဉ်ကာဖူးပွင့်သောပန်းဟုဆိုထိုက်သည်။ သို့သော် ထိုပန်းကို စိုက်ပျိုးသူတို့ ဘဝကား ဖြောင့်ဖြူးလှပခြင်း မရှိတတ်။
ယုံကြည်မှုအတွက် သူ့ဘဝ၏အကောင်းဆုံးအချိန်များကို နံရံလေးဘက်ကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့၊ ယခုတဖန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆဲဖြစ်သော်လည်း သူသည် နိုင်ငံရေးသတ္တဝါမျှသာမဟုတ်ပေ။စကားလုံးများ၊အတွေးစိတ်ကူး
များဖြင့် ဖန်တီးခဲ့သော်လည်း သူသည်အိပ်မက်နှင့် တောကစားနေသော အနုပညာသည်မျှသာ မဟုတ်။
ကြောင်း တွေ့မြင်ရသည်။ ထိုအဖွဲ့အနွဲ့သည် သမိုင်း၏ မှန်ကူကွက်တခုအဖြစ် ပြိုးပြက် ကျန်ခဲ့လိမ့်မည်
ဟု ကျနော်တို့ ယုံကြည်သည်။
သည်။၂ဝဝ၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် သူ့ အသက် ၄၇ နှစ်ပြည့်ပြီ။ သံတိုင်နောက်က မွေးနေ့ ကိတ်ပေါ်တွင် ကျနော်တို့ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းခွင့်မရသော်လည်း သူ့နှလုံးသား၏အလင်းရောင်ကို
အားလုံးထံ ပျံ့နှံ့ရန် သည်စာအုပ် ငယ်ထုတ်ဝေခြင်းသည်ပင် ကျနော်တို့ သူ့ အပေါ်ထားသော အချစ်နှင့် ဂါရဝဖြစ်သည်။
ဖြစ်သည်။ အဆုံးတွင်မူ အကောင်ကနိုင်မြဲ၊ အမှန်ကအောင်ပွဲခံမြဲ၊အသစ်ကအစားတိုးနေရာယူမြဲသာဖြစ်
ကြောင်း သမိုင်း ဇာတ်ကြောင်းများက သက်သေခံနေသည်ကို သတိမူအပ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် ထိုဇာတ်ကွက်များကို သူရဲကောင်း များဖြင့်သာ ကပြခဲ့သည်မဟုတ်။
လူ့ အဖွဲ့အစည်းတခု၏ အခြေခံအကျဆုံး လူထုကြီးသည်သာ သမိုင်း၏ ဇာတ်လိုက် ကျော်များဖြစ်ကြောင်း သူက လှပရိုးရှင်းစွာ ဖွင့်ဟဖော်ကျူးပြခဲ့သည်။လိုရာခရီးကို မောင်;နှင်ရာတွင် ရှေ့ကိုသွားရန် နောက်ကိုိုကြည့်ကြရသည်သာ။ သူချစ်ခင်သော ပြည်သူလူထုကြီးထံ သူကိုယ်တိုင် ပေးပို့လိုက်သော မွေးနေ့ လက်ဆောင်မှာ နောက်ကြည့်မှန်တချပ်ဖြစ်ကြောင်း အံအားသင့်ဖွယ်ရာ တွေ့ကြရပေသည်။
Ko Min Ko Naing Book(နောက်ကြည့်မှန်)
အားလုံးဖတ်လို့ ရအောင် လုပ်ပေးသော သူငယ်ချင်း ဒီမိုဝေယံ အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, December 12, 2009
နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုနှင့် ၁၉၉၁ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှု ..။
၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လထဲမှာ ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာ တွေကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဗယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့ ပြည်သူတွေက လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစားချစ်ခင်တဲ့ ပြည်သူထဲမှာ ကျမလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစားတာက သူ့ရဲ့ အများအကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်နိုင်တာတွေ၊ ပညာဉာဏ်မြင့်မားတာတွေ စတဲ့ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ ကြောင့်ပါ။ ချစ်ခင်တာကတော့ သူဟာ
မြန်မာ ပီသပြီး ကျက်သရေရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တဦး ဖြစ်တဲ့ အပြင် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သမီး ဖြစ်တာကြောင့်
ကျမ ခပ်ငယ်ငယ်က ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ ရောက်တိုင်း ကျမအဖေက တာဝါလိန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြတိုက်ကို ခေါ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ရောက်တိုင်းလည်း သူ ဘယ်က ကြားလာ
မှန်းမသိတဲ့ စကားတခွန်းကို ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။အဖေက “ဗိုလ်ချုပ်က ပြောဖူးတယ် ရေနစ်ပြီး
သေသွားတဲ့ အောင်ဆန်းလင်းက အထက်၊ ပြီးရင် အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲ” လို့ ပြောတတ်ပါတယ်။
၁၉၈၈ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက် နေ့က ရွှေတိဂုံ စေတီ အနောက်မြောက်ဘက် လူထုအစည်းအဝေးပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားဟောတော့ ဗမာပြည် လူငယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (BYLF) က
ဒုဥက္ကဋ္ဌ ကိုအောင်ဒင် က ကျမနဲ့ မတင်တင်ဦးကို အန်တီ့ရဲ့ လုံခြုံရေး ယူဖို့ ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းကမှ အန်တီ့ကို အနီးကပ် တွေ့ခဲ့ဖူးတာပါ။ ကျမ က အန်တီ့ကို မြန်မာ အမျိုးသမီး
တဦးအနေနဲ့ သိပ်ကို သဘောကျခဲ့ ပါတယ်။
ကျမရဲ့ ဘကြီးက ဦးသန့်ရဲ့ တတိယ ကိုယ်ရေးအတွင်းဝန် အဖြစ်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂမှာ တာဝန် ထမ်း
ဆောင်စဉ်က ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ ဆုံခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဘကြီးက ပြောပြပါတယ်။ အန်တီက
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေရပေမယ့် မြန်မာ အ၀တ်အစားကို ခုံမင်သလို ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ
ကိုလည်း အမြတ်တနိုး ကျင့်သုံးတယ်လို့ ဘကြီးက ပြောတယ်။
ကျမတို့ ချစ်ခင် လေးစားရတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် နိုဗဲလ်ဆု ရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာတဲ့အပြင် နိုင်ငံရေး အခြေအနေ ဘယ်လို ပြောင်းလဲသွားနိုင်မလဲ ဆိုတာကိုပါ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က အပြတ်အသတ် အနိုင်ရထားပေမယ့်
အာဏာကို မလွှဲအပ်သေးပါဘူး။ တချိန်တည်းမှာပဲ ကောလာဟလ သတင်းက ထွက်လာပြန်ပါတယ်။
အန်တီ ဆုယူမယ်ဆိုရင် သွားခွင့်ပြုမယ်၊ ပြန်လာခွင့်တော့ မပြုဘူးတဲ့၊ ဒီ ကောလာဟလကြောင့်
တချို့လူတွေ စိတ်ပူကြပါတယ်။ ကျမ ကတော့ စိတ်မပူပါဘူး။ တကယ်လို့ အဲဒါအမှန် ဖြစ်ခဲ့တယ်
ဆိုရင်တောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထွက်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျမ ယုံကြည်လို့ပါ။
တချို့ လူကြီးတွေက မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး နိုဗဲယ်ဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ အန်တီ့ကို နေအိမ် အကျယ်ချုပ်
်ကနေ မဖြစ်မနေ လွှတ်ပေး နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ လွှတ်ပေးဖို့ မျှော်လင့်
တာပါ။ နောက်တကြိမ်လည်း ထပ်မဖမ်း လောက်တော့ဘူး လို့ တွက်ကြပါတယ်။ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ
အရေးဟာ ပိုပြီးတိုးတက်လာဖို့ကိုလည်း မျှော်လင့်ကြပါတယ်။
တခြား နိုဗယ်ဆုရှင်တွေ စုပေါင်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် တောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတွေကိုလည်း ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တောင်းဆို လာကြပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးကလည်း မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး ကို ပိုပြီး
ကျမတို့ရဲဘော်တွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကလည်း အန်တီ လွတ်မြောက်ပြီး နိုင်ငံရေး အခြေအနေ
တိုးတက်လာဖို့၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အမြန်ဆုံး ပြန်လွတ်လာဖို့ကို မျှော်လင့်စောင့်စား
နေကြပါတယ်။အဆိုး မြင်တတ်တယ်လို့ ခေါ်ရမလား၊ စစ်အစိုးရကို ကွက်တိမြင်တတ်တယ်လို့
ပြောရမလား မသိပါဘူး။ တချို့ လူတွေက ဘာမှ ပိုထူးခြားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
စစ်အစိုးရရဲ့ သတင်းစာတွေကတော့ နိုဗယ်ဆုရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ကို အကြီး အကျယ် ဝေဖန်
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ အများစု ကလည်း စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကို
စိတ်မ၀င်စားတဲ့ သူတွေတောင် အန်တီ နိုဗဲလ်ဆု ရတဲ့အကြောင်းကို တဖွဖွ ပြောနေကြပါတယ်။
ကျမ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားမှန်း သိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက မေးပါတယ်။ “ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးမှာလား” တဲ့။ ကျမ ကလည်း “ လွှတ် ပေးဖို့တော့ မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ပဲ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ကျမလိုပဲ ယုံကြည်တဲ့သူတွေ အတော်များများ ရှိပါတယ်။ နိုဗယ်ဆု ရခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ဘယ်သူမှ သေချာမသိပါဘူး၊ အမျိုးမျိုးသော ခန့်မှန်းချက်၊ မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ရင်ခုန်လှုပ်ရှား ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကို ကျောင်းသားများ နားနေဆောင်
(RC) ထဲမှာကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲကို မေဂျာအလိုက် ပြိုင်ကြပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ရဲ့ ပျော်ရွင်ဖွယ်တွေထဲမှာ အားကစားပွဲ တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
ကိုယ့်မေဂျာပြိုင်မယ့်နေ့ဆိုရင် အင်တိုက်အားတိုက် သွား အားပေးကြလေ့ရှိပါတယ်။ အော်ကြ ဟစ်ကြ မခံနိုင်အောင်ပြောကြနဲ့ ဆူညံနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်စရာ ကောင်းတာက ပွဲပြီးရင် ပြီးသွားတာပါပဲ။ တဦးနဲ့တဦး ဗွေမယူကြပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ RC ထဲမှာ နေ့တိုင်း လူတွေစည်ကားနေပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ အားကစားပွဲတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ အာရုံကို လွှဲတဲ့
လုပ်ရပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရက ကျောင်းသားထုရဲ့ နိုင်ငံရေး အမြင်အပေါ် လျှော့တွက်တာပါ။
ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့မှာ BYLF က အေးကျော်က ပြောပါတယ်။ “RC ထဲမှာ စာဝေလိမ့်မယ်၊ နင်တို့
စောင့်နေ” တဲ့။ ကျမက “ဘယ်နေ့လဲ” လို့မေးတော့ သူက “၁၀ရက်နေ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့” တဲ့။
ဒါကြောင့် ကျမလည်း RC ထဲကိုနေ့တိုင်းရောက်ပါတယ်။ စာဝေတာနဲ့ မကြုံခဲ့ပါဘူး။
ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် ညနေပိုင်းမှာ ကျမတို့ သင်္ချာ တတိယနှစ် Section 1လက်တွေ့ခန်းဝင်ရပါတယ်။
လက်တွေ့ လုပ်နေတုန်း သရုပ်ပြ ဆရာမတွေ အချင်းချင်း တီးတိုး၊ တီးတိုး ဖြစ်နေကြတာကို တွေ့
ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သေချာမသိရပါဘူး။ ခဏနေတော့ “စာအုပ်ထပ်၊ လက်မှတ်ထိုး၊
ပြီးရင် ပြန်လို့ရပြီ” လို့ အခန်းစောင့်တဲ့ ဆရာမကပြောပါတယ်။ ကျမတို့ ကျောင်းသားတွေက
“လက်တွေ့ မပြီးသေးဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ” ဆိုပြီး ၀ိုင်းမေးကြပါတယ်။ ဆရာမက “လက်မှတ်
ထိုးရင် အမှတ်ပြည့်ပေးမယ်” ဆိုလို့ လက်မှတ်ထိုးပြီး ထွက်လာကြပါတယ်။
ကျမက ဘာဖြစ်လဲ သိချင်လို့ RC ဘက်ကို ထွက်လာပါတယ်။ RC ရှေ့ မှာ မြင့်သန်း (တိုက်ပွဲဝင်ကော်မတီ) နဲ့တွေ့ပါတယ်။မြင့်သန်းက “ပထမဦးဆုံး RC အပေါ်ထပ်ကနေ ပွဲကြည့်စင်ဘက်ကို စာတွေဝေချလိုက်တယ်၊ ပြီးတာနဲ့ စာဝေတဲ့ ဘိုဘိုဟန်နဲ့ မင်းလှိုင် (မောင်မှိုင်း) က ထွက်သွားတယ်၊ ထောက်လှမ်းရေးက နောက်ကလိုက်သွားတယ်၊ သူတို့ ၂ ယောက် ၀ိဇ္ဇာ ခန်းမဘက်မှာ စာကပ်တဲ့ အချိန် ထောက်လှမ်းရေးက ခါးပိုက်နှိုက်လို့ အော်ပြီး ဖမ်းတယ်၊၊
ဘိုဘိုဟန်က အဓိအတိ လမ်းမဘက်ကို ထွက်ပြေး တယ်၊ သူ့ နောက်ကို တောက်လျှောက် ခါးပိုက်နှိုက်
ဆိုပြီး အော်လိုက်တယ်၊ ဘိုဘိုဟန်က အဓိပတိ လမ်းမှာ သွားနေတဲ့ ကားကို လှမ်းတားပြီး တက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကားပိုင်ရှင်က ထောက်လှမ်းရေးကို အပ်လိုက်တယ်၊ ထောက်လှမ်းရေးက ဘိုဘိုဟန်ကို ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီး သွားတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီနေ့က အားကစားပွဲ တွေကိုလည်း ရပ်ပစ်လိုက်တယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၀ရက်၊ မနက် ၁၀ နာရီ လောက်မှာ ကျမ သူငယ်ချင်းရီနဲ့ မြင့်သန်း၊ ကျမတို့ သင်္ချာဆောင်
(ULB) ကို ရောက်လာ ပါတယ်။ ရီက“ဒီနေ့ ချိန်းပွဲရှိတယ် လိုက်မလား” ဆိုပြီး လာခေါ်ပါတယ်။
အတန်းထဲက လူတွေက ဘာချိန်းပွဲလဲ ဆိုပြီး ၀ိုင်းမေး ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျမက သိချင်ရင် လိုက်ခဲ့ဆိုပြီး ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ တချို့လည်း စိတ်ဝင်စားလို့ လိုက်လာကြပါတယ်။
ကျမတို့ အပေါ်ထပ်ကိုတက်ပြီး ထပ်ခေါ်တော့ သင်္ချာ တတိယနှစ် section2က ကြူကြူနဲ့ တခြားကျောင်းသားတွေလည်း လိုက်လာကြပါတယ်။ကျမတို့ ULB က ထွက်လာတဲ့ လူအုပ်စုက
RC ထဲမှာ ၀င်ပြီးဖွနေကြပါတယ်။ RC ထဲမှာလည်း ကျောင်းသား အတော်များများ ရှိ နေကြပါတယ်။
တချို့က အားကစားပွဲများ ပြန်စမလား ဆိုပြီး လာစောင့်တာပါ။ တချို့ကလည်း မနေ့က ဖြစ်ထားတဲ့
ပြဿနာ ဆက်ဖြစ်မလား သိချင်လို့ပါ။ အဲဒီအထဲမှာ ထောက်လှမ်းရေး တွေလည်း ပါပါတယ်။
ရီက အမေရိကန် အလံပါတဲ့ တီရှပ်ကို ၀တ်ထားပါတယ်။ ကျမတို့လူစု R.C ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာ
ပဲ ၀ိဇ္ဇာ ခန်းမရှေ့မှာ လူစုနေတဲ့ ထွန်းထွန်းသန်း (စိုးမိုး၊ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ)၊ မျိုးမြင့် (အညာသား) တို့က R.C ဘက်ကို လမ်းလျောက် လာပါတယ်၊ ကျမ တို့လဲ R.C ထဲက ထွက်ပြီး ပလက်ဖောင်းပေါ်အရောက်မှာ လက်ခုပ်တွေ စ တီးကြပါတယ်၊၊
ကျမတို့ လက်ခုပ်တီးရင်ပဲ ထွန်းထွန်းသန်းတို့က မျက်နှာဖုံးတွေစွပ်ပြီး ခွပ်ဒေါင်းအလံကို စထောင်
လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ခွပ်ဒေါင်း အလံတွေ အားလုံးကို ကိုမြင့်ဆွေကရေးဆွဲပေးခဲ့တာပါ၊ သူလဲ ထောင်
၁၅ နှစ် ကျခဲ့ပါတယ်။
ထွန်းထွန်းသန်းက R.C ရှေ့က အုတ်ခုံပေါ်တက်ပြီး “ကျောင်းသားရဲဘော်အပေါင်းတို့၊ တခြားနိုင်ငံ
တွေက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တွေဟာ ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ ခေတ်မီ သင်ခန်းစာကို သင်ယူနေတဲ့
အချိန်မှာ ကျနော်တို့တွေက ခေတ်နောက်ကျနေတဲ့ သင်ခန်းစာ တွေကိုပဲ သင်ကြားခွင့်ရကြပါတယ်၊
ဒါတောင်မှ မြန်မာပြည်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး သင်ခန်းစာတွေထဲက ကွမ်တမ်သီအိုရီကို လေ့လာနေတဲ့
ကျောင်းသား ဘိုဘိုဟန်ကို ခါးပိုက်နှိုက်ဆိုပြီး ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အတွက် ကျနော်တို့
ကျောင်းသားတွေ အခုကိစ္စကို လုံးဝ ဆန့်ကျင်ပါတယ်၊ ဒါဟာ လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်”
ဆိုပြီး တရား စဟောပါတယ်။
ဘိုဘိုဟန်ကို အခုလို ဖမ်းလိုက်တာကို ကျောင်းသားတွေ မကျေနပ်ကြပါဘူး။ စာကြည့်တိုက်ရှေ့
ကွင်းပြင်က ကံ့ကော်ပင်တွေ အောက်မှာ ကျောင်းသားတွေ အုပ်စုလိုက် ရပ်ပြီး ထောက်ခံကြောင်း ပြသနေပါတယ်။ ကားတွေက ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လုပ်နေလို့ ရီက ကျမကို “တို့တတွေ လမ်းပိတ
်ကြရအောင်” ဆိုပြီး ပြောလို့ ကျမနဲ့ ရီ အဓိပတိ လမ်းမပေါ်ကို လွယ်အိတ်တွေနဲ့ လမ်းပိတ်
ဆက်ပြီး ရီက “ကျမတို့ကို ထောက်ခံတယ်ဆိုရင် အဓိပတိလမ်းပေါ်ကိုဆင်းခဲ့ကြပါ” လို့ အော်လိုက်
ပါတယ်။ ချက်ချင်းဘဲ ခက်မာနဲ့ ရာသက်ပန် (တောင်ငူဆောင်) တို့ အဓိပတိလမ်းပေါ် ဆင်းလာ
ကြပါတယ်။ ထပ်ပြီး ကျမတို့တွေက “ကျောင်းသားသွေး နီတယ် ဆိုတာ ပြကြစို့” ဆိုပြီးထပ်အော်တဲ့ အခါမှာတော့ ကံ့ကော်ပင်တွေ အောက်မှာရှိနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ လမ်းပေါ်ကို ဆင်းလာကြ
ပါတယ်။ အဓိပတိလမ်းပေါ်မှာလူတွေ တော်တော်များများ စုမိတော့ သီဟသူ (ကိုဆန်နီ) က “ကဲ၊ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်း တွေကို အလေးပြုကြမယ်၊ ပြီးရင် ၁ မိနစ်ငြိမ်ကြမယ်” လို့ ပြောတော့ ကျမတို့တွေလည်း အလေးပြုပြီး ၁ မိနစ်ငြိမ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ “ကမ္ဘာမကြေဘူး” သီချင်း ကို
“ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဖွဲ့ စည်းရေး………………….တို့အရေး”
“ဖမ်းဆီးထားသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးရေး…………..တို့အရေး ”
“၉၀ ရွေး ကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို အတည်ပြုပေးရေး……………တို့အရေး ”
“တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး………………………….တို့အရေး” ဆိုပြီး သံပြိုင်ကြွေးကြော်ကြပါတယ်။
ကျမတို့ ကျောင်းသားတွေမှာ အစွဲအလမ်း တခုရှိပါတယ်။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ ရှေ့က စတဲ့
တော်လှန်ရေးဟာ သွေးမြေ ကျတတ်တယ်တဲ့၊ ဒါကြောင့် ကျမတို့ အဲဒီနေရာကိုရှောင်ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာ ချီတက်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ R.C ရှေ့ကနေ အဓိပတိလမ်းမအတိုင်း ချီတက်ပြီး ရာမည၊ တောင်ငူဆောင်တွေကို လှည့်ပတ်ကြပါတယ်၊ ချီတက်စဉ် လမ်းတောက်လျှောက်မှာ ကြွေးကြော်သံ
တွေကို ဟစ်ကြွေးခဲ့ ကြပါတယ်။ အဲဒီ ဆန္ဒပြပွဲမှာ ကျောင်းသားထုဟာ ထောင်နဲ့ချီပြီး ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းထဲမှာ ဆန္ဒပြနေကြတုန်းမှာပဲ ကျောင်းတံခါးတွေကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းရဲ့ အပြင်ဘက်မှာလည်း ကျောင်းသား တအုပ်က ကျောင်းထဲဝင်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ် နေကြပါတယ်။
အဲဒီ ကျောင်းသားတွေကို သက်ထွန်း (လူဘောင်သစ်) က ဦးဆောင်ပါတယ်။
ချီတက် ဆန္ဒပြပြီးတော့ R.C ရှေ့ကို ပြန်အရောက်မှာ သပိတ်စခန်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်းသန်း၊
မျိုးမြင့်၊ ဆန်နီ၊ မောင်မှိုင်း တို့ တရားဟောနေကြပါတယ်။ ခဏနေတော့ အဲဒီအဖွဲ့ထဲက တယောက်က “ဒီနေ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဗဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်၊ ဒီတော့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အမျိုးသမီး တဦး တရားဟောပါ” လို့ တောင်းဆို
ကျမတို့ အမျိုးသမီးအုပ်စု ခေါင်းချင်းဆိုင်လိုက်ကြ ပေမယ့် ဟောမယ့်သူ ထွက်မလာပါဘူး။ ဒီတော့
အေးကျော်နဲ့ အငယ်ကောင်က ကျမကို နင်ဟောလိုက်ဆိုပြီး ပြောကြပါတယ်။ တကယ်က ကျမ ဘာမှ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျမ ဟောမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ရှေ့ကို
ကျမ R.C ပေါ်တက်ဖို့ အရပ်မမီတော့ ကျောင်းသားတယောက်က ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ပြီး
သူ့ပခုံးပေါ်တက် မတ်တပ် ရပ်ခိုင်း ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက တဖြည်းဖြည်း မတ်တပ် ရပ်ပေး
ပါတယ်။ အပေါ်က တယောက်က ဆွဲတင် ပေးပါတယ်။ အပေါ်ကို ရောက်တော့ “ကျမတို့မြန်မာပြည်
အနေနဲ့ ကမ္ဘာမှာ အမြင့်ဆုံးဆု တခု ဖြစ်တဲ့ နိုဗဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ရတဲ့အတွက် အားလုံး ဂုဏ်ယူကြပါတယ်၊ ကျမတို့ဟာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့
အတူ ဒီမိုကရေစီရေး အတွက် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြမှာပါ၊ အခုလို တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်
ကျောင်းသားထုကို စုစည်းဖို့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂဟာ လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်
သမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းခွင့်ကို လေးလေးနက်နက် တောင်းဆိုပါတယ်” ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကြွေးကြော်သံတွေ ကို ဆက်ပြီး ဟစ်ကြွေးကြ ပြန်ပါတယ်။ ကျမ အောက်ပြန်ရောက်တော့ မိုင်နီနီအောင်က “နင်ပြန်တော့၊ ကြာရင်မကောင်းဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။ ကျမနဲ့ မိုင်နီနီအောင်
(အိန်ဂျယ်) တို့ သန့်စင်ခန်းထဲမှာ အ၀တ်လဲဝတ်ပြီး ကျမရဲ့ ဆံပင်တွေကို အတိုဖြစ်သွားအောင်
ကျောင်းအ၀င်ဝ မှာတော့ ဆရာတွေက ကျောင်းသားကတ်တွေကို စစ်ဆေးပြီး ကတ်ပြနိုင်မှ အပြင်ထွက်ခွင့်ပေးပါတယ် ကျောင်းသား တွေကတော့ ချီတက်ဆန္ဒပြနေတုန်းပါ။ ကျမတို့ R.C
ထဲက မာလာဆောင်အဝအထိ ပေါက်တဲ့ ရေနုတ်မြောင်း အဟောင်းထဲကနေ လမ်းလျှောက်
ထွက်လာပါတယ်။ မာလာပေါက်ရောက်တော့ မြောင်းပေါက်ဝမှာစောင့်နေတဲ့ စစ်သားကို ကျမ
နေမကောင်းလို့ ပြန်ခွင့်ပေးပါ၊ အထဲမှာ ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြနေတော့ ဆရာတွေကတ်စစ်
နေတယ်၊ ကျမ ကျောင်းသားကတ် မေ့ခဲ့လို့ပါ ဆိုပြီး သရုပ်ဆောင် ကြပါတယ်။
စစ်သားက ကျမနဲ့ အိန်ဂျယ်ကို ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျမတို့ ၂ ယောက် လှည်းတန်းအထိ
ကားတခါစီး၊ လှည်းတန်းကနေ မြို့ထဲကို ကားတခါထပ်စီး၊ မြို့ထဲရောက်တော့ အိန်ဂျယ်က
အမေရိကန် စင်တာကိုဝင် သတင်းပေးပါတယ်။ ကျမကတော့ ကားငှားပြီး အိမ်ပြန်ပါတယ်။
ကျမ ကားမှတ်တိုင်မှာပဲ ဆင်းလိုက်တော့ ကျမမောင်လေးက လာစောင့်ပြီး “ပြေးတော့၊ အိမ်မှာ ထောက်လှမ်းရေး ရောက်နေတယ်” တဲ့။ ဒါကြောင့် ကျမလည်း သုံးခွမြို့က ကျမရဲ့ အဒေါ်အိမ်ကို တန်းပြေးပါတယ်။
နောက်မှ ကြူကြူ့ကို ၁၀ ရက်နေ့မှာပဲ ရူပဗေဒ ဌာနထဲအထိ ၀င်ဖမ်းခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။
တခြား ကျောင်းသူတွေကိုလည်း မာလာပေါက်မှာ ကားတစီး ရပ်ပြီး “အိမ်ပြန်ပို့မယ် ကားပေါ်တက်”
လို့ ခေါ်လို့ ကျောင်းသူတွေ ကားပေါ်ကိုတက်ကြတော့၊လှည်းတန်းလည်း ရောက်ရော အချုပ်ကားနဲ့ ပြောင်းတင်ပေးလိုက်ပြီး အင်းစိန်ထောင်ကို ပို့လိုက်တယ်လို့ သိရတယ်။
ကျမကို မမိတော့ မိသွားတဲ့ ကြူကြူ့ကိုပဲ ဂျပ်ဆင်ပေါ်တက် တရားဟောတယ် ဆိုပြီး တရားစွဲပါတယ်။ ရှေ့နေငှားပြီး လျှောက်လဲခွင့် မရတော့ ကြူကြူက သူကိုယ်တိုင်ပဲ လျှောက်လဲပါတယ်။ “ဒီလောက်မြင့်တဲ့ ဂျပ်ဆင်ပေါ်ကို ကျမ တက်ရအောင်၊ ကျမက Superwoman မှ မဟုတ်တာ” လို့ လျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။
မြင့်သန်းကိုလည်း ၁၀ရက်နေ့မှာပဲ ကျောင်းကအပြန် ၄၈ ဟိုင်းလက်(စ်) ကို စီးလာတုန်း သူစီးလာ
တဲ့ကားကို လမ်းမတော် ရဲစခန်းထဲ မောင်းခိုင်းပြီး ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။
၁၀ရက်နေ့ညမှာ ကျောင်းထဲမရောက်လိုက်တဲ့ ကိုကိုကြီးနဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တချို့က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အေးကျော်နဲ့ တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ နောက်တနေ့ ကျောင်းထဲကိုဝင်ပြီး
အားဖြည့်ဖို့ပါ။ တိုင်ပင်ပြီး အေးကျော်က သူ့အိမ်သူ ပြန်သွားပါတယ် ကျန်တဲ့သူတွေ ကိုကိုကြီး
အိမ်မှာအိပ်ဖို့ လိုက်အသွားမှာ အားလုံး အဖမ်းခံရပါတယ်။
၁၁ ရက်နေ့ မှာတော့ အဓိပတိလမ်း ၀င်ပေါက်ကို လုံးဝ ပိတ်ထားပါတယ်၊ ကျန်တဲ့ တံခါးပေါက်တွေ
မှာတော့ လူဝင်သာရုံလောက်ပဲ ဖွင့်ပေးပြီး ဆရာတွေက ပိုက်စိပ်တိုက် စစ်ဆေးပါတယ်။ စီးပွားရေး
တက္ကသိုလ် ဝင်ပေါက် တပေါက်တည်းပဲ ဘာမှ မစစ်ဆေးဘဲ ၀င်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
မနက် ၁၀ နာရီလောက်မှာ လူစုမိကြပါတယ်၊ လူစုမိမိချင်းပဲ ကျောင်းတံခါးတွေကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ပါမောက္ခချုပ်က ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမထဲကနေ ကျောင်းသားတွေကို လူစုခွဲဖို့၊ လူစုမခွဲရင် တပ်မတော်က အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲရလိမ့်မယ် ဆိုပြီး လော်စပီကာနဲ့ အော်ပါတယ်။
အပြင်မှာရှိနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေလည်း ကျောင်းထဲဝင်ဖို့ အတင်းကြိုးစားကြပါတယ်။ လိုင်းပေါက်
မှတ်တိုင်မှာ ရီရီထွန်း တရားဟောနေတုန်း ထောက်လှမ်းရေးက ၀င်ဖမ်းတာ ကိုဇော်မင်း (အာပြဲ)
နဲ့ တိုးတိုးမြင့် (ဖိုးသာထူး) တို့ ကယ်လိုက်လို့ ရီရီ အဖမ်းမခံခဲ့ရတာပါ။
ကျောင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပြီး ပါမောက္ခချုပ်ဆီ
တင်ပြကြပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာ ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွန့် ကိုယ်တိုင်
ဦးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကို ၀င်ရောက် စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသား အယောက် ၄၀၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်၊ ၁၁ ရက်နေ့မှာပဲ
ကျောက်တံတား မြို့နယ်မှာနေတဲ့ ရီရီထွန်းနဲ့ ကိုမြတ်စံတို့ကို ၀င်ဖမ်းတော့ အိမ်မှာရှိနေတဲ့
ကိုမြတ်စံကို မိသွားပါတယ်။ နောက် ၂ ရက်အကြာမှာ ခင်မိုးအေး ကိုလည်း ဖမ်းမိသွားပါတယ်။
အင်းစိန် အုပ်စု အကုန်လုံး နီးပါး ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၉၁ ခု ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာ ကျောင်းသားတွေ အများကြီး အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း အတော်ကြီးမားတဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု တခုဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ လှုပ်ရှားမှုဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုလားချက်ကို ထင်ဟပ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့တိုက်ပွဲ
တပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကျောင်းသား သမိုင်းဟာ တောက်ပမြဲ တောက်ပ
၁၉၉၁ ခု ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဗဲလ်ဆုကို ရခဲ့ပေမယ့် စစ်အစိုးရ
ကတော့ ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်မလွှတ်တဲ့အပြင် နောက်ထပ် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို ရာနဲ့ချီပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသား ညီလာခံကို တမေ့တမော အချိန်ဆွဲ
ကျင်းပခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ဖို့ စစ်အာဏာရှင် ဥပဒေကို အသက်သွင်း
ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ (UN)ရုံးရှေ့မှာပြုလုပ်သည့် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်ရေးနေ့ အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း
Updated Information About Nyi Nyi Aung 's Hunger Strike- for Immediate Release (Dec 11,2009)
ပေးပို့ ပေးသော ကိုအောင်မျိုးသိမ်းနှင့် ကိုလူချော အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
အောင်မြင်သော်အဆိုတော်မျိုးကြီး မဖြစ်ခင်က သူရဲ့ တချိန်က အမှတ်တရ နှင့် သူ့ ရဲ့ ပရိတ်သတ်.။
ဒီလိုနဲ့ ဆိုင်ထဲမှာ အမြဲလာ စားသောက်ကြပြီး ဆိုင်ရှင်နဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ လူငယ်တွေက ဒီလို ပြောတော့ ဆိုင်ရှင် အကိုကြီးလည်း ခွေကို ထုတ်ဖို့ပဲ ဖြစ်နေတော့တယ်.။အဆိုတော် လူငယ်လေးကို ကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာ မပေါ်အောင် ငိုက်ဆောင်းထားတဲ့ ဦးထုပ်အောက်က ခေါင်းက အောက်ကို စိုက်ကြနေတယ်.။ ဒါ အရက်မူးနေလို့ မဟုတ်ပါ.။ စိတ်ဓါတ်ကျသွားမိခြင်းပါပဲ.။
ပြီးတော့ ကောင်မလေး ဆက်ပြောတယ်. . .
“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.အကို.။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်.။ ဖွင့်ပေးတဲ့ အတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။ ”
ဒီိလိုပြောပြီး သူခွေလေးကို ပြန်ယူလာတယ်.။ နောက်တော့ သူစားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး ဆော့ပင်လေးထုတ်ပြီး အခွေကာဗာမှာ တစ်ခုခုရေးနေတယ်.။ ပြီးတော့ သူတို့ စားထားသမျှ ရှင်းပြီး အထမှာတော့ အဆိုတော်သစ်လေးက ခုက သူ့အခွေကို ဆက်ဖွင့်ဖို့ ပြောခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးဆီကို တန်းသွားပြီး .. .
“ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ညီမလေးရာ.။ သူများတွေ အကို့ သီချင်းကို လက်မခံဘူးလို့ ပြောနေချိန်မှာ အကိုလည်း တကယ်ကို စိတ်ဓါတ်ကျသွားတယ်.။ ဒီအချိ်န်မှာ ညီမလေး ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် အကို ဘယ်လောက် စိတ်ဓါတ်တက်သွားလဲ .ညီမ သိမှာ မဟုတ်ဘူး.။ ဒါပေမဲ့. . ဘာပဲ ပြောပြော ညီမလေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရော့...ဒါကတော့ အကို့ဆိုထားတဲ့ အခွေ ၊ ညီမကို လက်ဆောင်ပေးတာ ၊ ဒီလကုန်ထွက်မယ် ညီမ.။ ညီမပြောခဲ့စကားတွေ အကို ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး.။ အကို အမြဲကြားယောင်နေမှာပါ..။ ”
ပေးပို့ ပေးသော ကောင်မလေး၏သူငယ်ချင်းမောင်လေး စိုင်းငယ် အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, December 11, 2009
ဒလိုင်းလားမား နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ မှာ မီးထွန်းဆုတောင်းပွဲ။ (အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီ)
ယနေ့ ၂၀၀၉၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော ( ၆၁ )နှစ်မြောက် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး နေ့တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊နယူးဒေလီမြို့၌ချီတတ်လမ်းလျှောက်ပြီးဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ညနေ ၅ နာရီခွဲမှာ ဂျန်တာမန်တပန်းခြံကနေ စတင်ပြီး ညနေ ၇ နာရီခွဲမှာ ပြီးဆုံးတယ်လို့
သိရှိရပါသည်။ ချီတက်လမ်းလျှောက်ဆုတောင်း သူတစ်ရာကျော်ရှိတယ်လို့လဲသိရှိရပါသည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက် စက်တင်ဘာဆရာတော် ဦးထာဝရ က “ ဦးဇင်းတို့ ယနေ့လမ်းလျှောက်ပြီး ဆုတောင်းပွဲလုပ်ပါတယ်။ဒလိုင်း လားမား နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည် အတွက် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့မှာ မီးထွန်းဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ အလောစတားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ balantak သေဆုံးသွားတဲ့ မြန်မာမိန်းခလေးတယောက်အကြောင်း..။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, December 10, 2009
အမှတ်တမဲ့မှ... အချိန်တိုအတွင်း တစ်ဘ၀ဒုက္ခိတ ဖြစ်သွားရသူများ..။
ယာဉ် မတော်တဆမှု ကြောင့် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရသူများ အမှတ်တရနေ့' အခမ်းအနား။
နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ညွှန်ပြရာမြားအတိုင်း လသာ အ.ထ.က (၂) ကျောင်းဝင်းအတွင်း မြနီလာခန်းမထဲသို့ ၀င်လိုက်သည်နှင့် ခြေမရှိ၊ လက်မရှိသူများ၊ တချို့က ဘီးတပ်ကုလားထိုင်တွေနှင့်။ တချို့ကမူ ချိုင်းထောက်များ၊ ကျောက် ပတ်တီး ဖွေးဖွေးစည်းထားသူများကို ခန်းမထဲမှာ အစီအရီ မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။
သက်ငယ်၊ သက်လတ်၊ သက်ကြီး မရွေး ယောက်ျား၊ မိန်းမ အရွယ်စုံ။
အချိန်နောက်ကျမှ ရောက်လာသူ ခြေနှစ်ဖက်စလုံး မရှိသူတစ်ဦးကိုလည်း ယာဉ်ထိန်းရဲများက ချီပွေ့ပြီး ခန်းမထဲ ကူညီ မချီလာကြသည်။တက်ရောက်လာသူများ၏ ဘ၀ အခြေအနေ ပြောင်းလဲသွားမှုများသည် မျက်စိတစ်မှိတ်၊ လျှပ်တစ်ပြက် အချိန်တို ခဏလေးအတွင်း မထင်မှတ်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်ချည်းပင်။
၁၉၈၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ မတော်တဆ ယာဉ်ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ သူ ၇၇ ဦးကို ဖိတ်ကြားကာ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားလည်း ဖြစ်သည်။"ဘတ်စ်ကားပေါ် တက်မယ်ဆိုရင် ကားသေချာရပ်ပြီဆိုမှ တက်ကြဗျာ" ဟု အသက် ၄၀ ကျော် ကိုသန်းထူး က လေးနက်စွာ ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၉ ရက် နေ့က ဖြစ်သည်။၂၀၂ အဲကွန်းဘတ်စ်ကားပေါ် ခြေတစ်ဖက်တင်မိရုံ ရှိသေး ဘတ်စ်ကားစပယ်ယာ၏ 'မောင်း'ဆိုသော အသံနှင့် တစ်ပြိုင်နက်ခြေတစ်ဖက် ကားလမ်းပေါ် ဒရွတ်တိုက်အနေ အထားနှင့် ကိုသန်းထူး ပါသွားခဲ့သည်။
သူသတိဝင်ပြီး လက်လွှတ်ပြန်ဆင်းနေခဲ့မယ်ဆုံးဖြတ်ချိန် ကားကလည်း အရှိန်အတော်ရနေပါပြီ။ ဒီအချိန်ဟာ သူ့ဘ၀ရဲ့ အပြောင်းအလဲပါ။လက်လွှတ်လိုက်ချိန်မှာ အရှိန်နှင့် ကားအောက်ထဲဝင်သွားပြီး ကား နောက်ဘီးဟာ သူ့ခြေသလုံးကို ကြိတ် နင်းသွားသလို လက်လည်း လမ်းပေါ် ကျသည့်အရှိန်နှင့် ကျိုးသွားခဲ့ရသည်။
"အမှန်ဆို နေခဲ့ဆိုလည်း နေခဲ့လို့ ရပါတယ်။ ခရီးသည် ရချင်ဇောနဲ့ အတင်းတင်၊ အတင်းမောင်းခဲ့လို့ အခု လိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါ၊၊ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းညက အားကိုးပြီး နေနေရတဲ့ သားသမီးသုံးယောက်နဲ့ မိန်းမကို ဒီဒုက္ခိတ မသန်မစွမ်းဘ၀နဲ့ ဘယ်လို လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးရမလဲဆိုတာကို တွေးရင်း ယောက်ျားကြီးတန်မယ့် မျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်"ဟု ကျောက်ပတ်တီး စည်းထားသည့် ခြေထောက်နှင့်လက်ကို ငေးကြည့်ရင်း ကိုသန်းထူးက ဆိုသည်။
ပေါင်ရင်းကနေ ခြေနှစ်ဖက်စလုံး ဖြတ်လိုက်ရသည့် အသက် ၂၉ နှစ် အရွယ် ကိုဆန်းဦးအဖြစ်က
တစ်မျိုးပင်။အလုပ်မှအပြန် အိမ်ပြန်ချင်ဇောနှင့် ၂၂၉ ဒိုင်နာလိုင်းကားကို ရသည့်နေရာက တွယ်စီးပြီး
လိုက်လာခဲ့သည့် သူ့ကို ကားတစ်စီးက နောက်မှဝင်ဆောင့်မိရာက ခြေနှစ်ဖက်စလုံးကို ဖြတ်လိုက်ရသည့် အဖြစ်ပင်။
ကားတွေကို တွယ်စီးကြတာ အလွန် အန္တရာယ်များပါတယ်။ ဖြစ်မှ ပြန်လုပ်လို့ မရဘူးလို့လည်း သူက အထပ်ထပ် သတိပေးနေသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ မကြုံရအောင် အားလုံးက ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်း တွေ လိုက်နာကြဖို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းမှုများသည် ယခုပွဲ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များပင်။
ယခုကဲ့သို့ အဖြစ်မျိုးများကို ပြည်သူများ သတိထားမိလာပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင် 'ယာဉ်မတော်တဆမှု ကြောင့် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရသူများ အမှတ်တရနေ့' အခမ်းအနားကို ထိုနေ့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး အကြိမ် ကျင်းပခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံက နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ တတိယပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ကို World Day of Remembrance for Road Traffic Victims အဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့သည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူများကို အချိုးချ ကြည့်လျှင် လူဦးရေတစ်သိန်းလျှင် ၂၃ ဒသမ ၄ ဦး သေဆုံးနေပြီး တတိယ အမြင့်ဆုံးသေဆုံးမှု အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေသည်။လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၆-၀၇ ခုနှစ်က ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ရောက်ရှိလာသူ ၃,၆၃၈ ဦး၏ ၄ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင်နှုန်း သေဆုံးခဲ့ရသည်။
ထိုကဲ့သို့ သေဆုံးမှုများတွင် လမ်းအသုံးပြုသူ(ခြေကျင်လျှောက်)များအား ယာဉ်တိုက်ခံရမှုမှာအဖြစ်များပြီး ကား မတော်တဆဖြစ်မှုမှ သေဆုံးမှုမှာ ဒုတိယအဆင့် ရှိနေသည်။
အခမ်းအနားတက်ရောက်သူများထဲ မှာ ချိုင်းထောက်နှင့် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေသည့် မိတ္ထီလာက သုံးနှစ် သားလေး မောင်အောင်ဝင်းသည် မိဘနှစ်ပါးနှင့် အတူ ခရီးသွားရင်း ကားမှောက်ရာက မိဘနှစ်ပါးစလုံး ဆုံးပါးကာ ယနေ့ ဦးလေးဖြစ်သူ၏ စောင့်ရှောက်မှု အောက်၌ ရှိနေသည်။
ယခုကဲ့သို့ ယာဉ်တိုက်မှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုမှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကျပ် ၉၄ ဘီလျံခန့် ရှိပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကျပ် ၁၅၇ ဒသမ ၅ ဘီလျံ ရှိနေပြီဟု သိရသည်။ကမ္ဘာပေါ်တွင်လည်း ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် နှစ်စဉ် လူ ၁ ဒသမ ၃ သန်းခန့် သေဆုံးနေရပြီး သန်း ၅၀ ခန့် မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိနေသည်။
နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ သဝဏ်လွှာ (Joint Statement)..။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမှာ ပြုလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) ၁၀ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း...။
အထိန်းသိမ်းခံနေရသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဦးအောင်ကြည် တို့ ယနေ့ထပ်မံတွေဆုံ ...။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးနှင့် ယနေ့ ( ၉.၁၂.၂၀၀၉ ) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဤတွေ့ဆုံမှုသည် လွန်ခဲ့သည့် (၂)လအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ၂၀ အတွင်း ၁၄ နှစ်တာ ထိမ်းသိမ်းခံနေခဲ့ရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနှင့် ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးအား ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံတော် ဧည့်ဂေဟာတခုတွင် ၄၅ မိနစ်ခန့်တွေ့ဆုံခဲ့ရပြီး ပြီးခဲ့သည့်လက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံ သူမပေးပို့ခဲ့သောစာနှင့် ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ သည်ဟု ယူဆရပါသည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံအားပြစ်ဒဏ်ခတ်ထားသည့် စီးပွါးရေးနှင့် အခြားပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအား နိုင်ငံ တကာကလက်ခံသဘောပေါက်လာစေရန်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနှင့် ကူညီရန်အသင့်ရှိကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံ ပေးပို့ခဲ့သည့် ယခင်စာတစောင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့သော ပထမစာမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံသို့ မရောက်မှီတွင် သူမ၏ပါတီက ကြောညာ ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဒုတိယစာမှာ တရားဝင်မဟုတ်ဘဲ အင်တာနက်ဘလော့ဂ်များမှတဆင့် သတင်းဌာနများသို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
“ဒါဟာ အစိုးရကို မီဒီယာကနေတဆင့် ဖိအားပေးဘို့ လုပ်ဆောင်ချက်တခု ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ထောက်ပြဆွေး နွေးသူက စာမျက်နှာပြည့် ဖေါ်ပြထားသည်။
အဆိုပါတင်ပြချက်က မီဒီယာကိုမရိုးမသားအသုံးချ၍ စစ်အုပ်စုကို အကျပ်ကိုင်ခြင်းသည် “တဖက်သား၏ တုန့်ပြန်မှုကို နှောင့်နှေးစေနိုင်ပြီး အပေါင်း လက္ခဏာဆောင်သော တုန့်ပြန်မှုကို ရရှိရန်ခက်ခဲနိုင်သည်”ဟု သတိပေး ဖေါ်ပြထားသည်။
“တဖက်သား၏ ရည်ရွယ်ချက်လမ်းကြောင်းသည်ပင်လျှင် ပြောင်းသွားနိုင်သည်”ဟုလည်း ဆိုသည်။
NLD က ပြီးခဲ့သည့်လက ဒုတိယစာပေါက်ကြားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းခဲ့ပြီး လူငယ်အဖွဲ့ဝင်များထံမှ ပေါက်ကြားခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်းပြောခဲ့သည်။
ရင်းမြစ်.။ ကျိုဒို သတင်းဌာန..။
လူ့အသိုင်းအဝန်း မှာ လူသားတွေ အတွက် အလိုအပ်ဆုံး အရာဟာ ဘာလဲ လူသားတိုင်းမှာ ဒီအခွင့်အရေးတွေ ရှိရလိမ့်မယ်.။
ကိုပင်ဟေဂင် ခရီးစဉ် သွားမည့် ဦးသိန်းစိန် ကျိုင်းတုံ မူးယစ် မီးရှို့ ပွဲတက်ရောက်..။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၉၃ သန်းတန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး များမီးရှို့ ပွဲအခမ်းအနားကို ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံ ၌ကျင်းပရာ မြန်မာ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် နှင့် အတူ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ခင်ရီ တို့ တက်ရောက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများ မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပြည်တွင်း အခြေစိုက်နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များ၊ ပြည်တွင်း စာနယ်ဇင်းများ၊ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ် များတက်ရောက်ခဲ့သည် ။
အဆိုပါ မူးယစ်ဆေးဝါးမီးရှို့ ဖျက်ဆီးပွဲ အခမ်းအနားတွင် မီသာဖက်တမင်း စိတ်ကြွဆေးပြား ခုနှစ်သန်း ၊ဘိန်းဖြူ ရှစ်ရာတစ်ဆယ့်ကိုး ကီလိုဂရမ် နှင့် အိုက်စ် ခေါ်လူငယ်များ အသုံးများသည့် ခရစ်စတ္တယ် မီသာဖီတမင်းများ ဆယ်ကီလိုဂရမ် ပါဝင် သည် ဟု သိရသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ရဲချုပ်ခင်ရီက “ဓာတုဗေဒ ဆေးဝါးများ ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော မူးယစ်ဆေးဝါး များသည် မိမိတို့ နိုင်ငံမှ ထွက်ရှိ ခြင်း မဟုတ်ဘဲ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများမှဝင်ရောက်လာ ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ပြောသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မီးရှို့ ဖျက်ဆီးပွဲ အခမ်းအနားတွင် တွေ့ ရသည့် မြန်မာ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် သည် ဒိန်းမတ် နိုင်ငံ ကိုပင်ဟေဂင် မြို့ တွင် ကျင်းပမည့် ကမ္ဘာ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲ မှု ဆိုင်ရာ နှီးနှောပွဲ တွင် အီးယူ တာဝန်ရှိ သူများ နှင့် တွေ့ ဆုံမည့် အစီ အစဉ် ရှိသည်။
ကိုပင်ဟေဂင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ရ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ
လ ၁၈ ရက်နေ့ ထိ ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, December 09, 2009
ဒိန်းမတ်ရောက် မြန်မာဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ဆန္နပြပွဲ လှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံ များ..။
၅.၁၂.၂၀၀၉ စနေနေ့က မြောက်ဒဂုံ (၄၉)ရပ်ကွက် ဘုရင့်နောင်လမ်း အိမ်အမှတ် (၁၃၀၈) မှာ အင်္ဂါမိသားစုမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် သံဃာငါးပါး အားဆွမ်းဆက်ကပ် လှုဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ဖို့ ဆုတောင်းခဲ့ ကြပါတယ်။
အခမ်းအနားကို အစီအစဉ် (၇)ရပ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဘဘဦးဝင်းတင်၊ ဦးအုန်းမောင်၊ သခင်ဖေသန်း၊ ဦးချို၊ ဖျာပုံနီလုံဦး နှင့် ဖိတ်ကြားထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ တက်ရောက်ကြပါတယ်။ အဖမ်းဆီးခံထား ရတဲ့ အင်္ဂါဝတ်ပြု ဆုတောင်းမိသားစု အဖွဲ့သားများ အတွက်ကဗျာရွတ်ပါတယ်။ ဘဘဦးဝင်းတင်နဲ့ အဘ ဦးအုန်းမောင်က ထောင်အတွေ့အကြုံတွေ ပြောပြပါတယ်။ တက်ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်များအား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားပါတယ်။
အခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာပါတယ်။ မနက် (၉) နာရီမှ (၁၂) နာရီအထိလို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ၁၂ နာရီကျော်မှ ပွဲပြီးဆုံးပါတယ်။ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဧည်သည်တွေကိုအကျွေးအမွေးနဲ့ ဧည်ခံပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အိမ်ရှေ့နဲ့ အိမ်မရောက်ခင် လမ်းမှာ ဓာတ်ပုံရိုက် သတင်းယူနေတဲ့ SB နဲ့ ကြံဖွတ်တွေ အများကြီးပါပဲ။
သတင်း ပေးပို့လာတဲ့ အတိုင်း ပြန်လည်တင် ပြလိုက်ပါတယ်။
အင်္ဂါဝတ်ပြုဆုတောင်းမိသားစုများနှင့် အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များဟာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂါနေ့တိုင်း ဘုရားမှာ မပျက်မကွက်တက်ရောက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုသို့တက်ရောက် ဆုတောင်းရာမှာ စစ်အစိုးရ လက်ကိုင်တုတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ကြံ့ဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင်နဲ့ ရဲ၊SB ဘုရားလုံခြုံရေး တို့ရဲ့ အနှောင့်အယှက် ပေးမှုနဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားမှုတွေကို ခံခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံး မတရားထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံနေရပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ အများအကျိုးအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပြီး အနစ်နာခံ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ အင်္ဂါဝတ်ပြုဆုတောင်းမိသားစု အဖွဲ့ဝင်များအား ကျွန်မမြတ်လေးငုံမှ လေးစားစွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း တင်အပ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သို့ မြဝတီ တံတားမှ တဆင့် လိုင်စင်မဲ့ တင်သွင်းမည့် မော်တော်ကားများ ..။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်ပို့မည့်မော်တော်ကားများမဲဆောက်မြို့ အ၀င် ဟွေ့ ဖိုင်ဂိတ်တွင်တွေ့ ရစဉ်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, December 08, 2009
ကာတွန်းဟန်လေး ရဲ့ဟာသကမ္ဘာပဒေသာ လေးတွေပါရှင်။
များများ ဖတ်ပါ၊ များများ နားထောင်ပါ။ ပြီးရင် သေသေချာချာ မချွင်းမချန့် သတင်းပို့ ပေးပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း အမှန်အမှား ခွဲခြားပါ။
ပြည်တွင်းမှ ပြောကြားမှုအရ - “မြန်မာပြည်မှာ ဘီဘီစီ၊ အာအက်အေ၊ ဗွီအိုအေ ပုံမှန် စွဲစွဲမြဲမြဲ နားထောင်တဲ့ သူတွေထဲမှာ နအဖလည်း ပါပါတယ်။ နားထောင်ပြီး အစီရင်ခံစာတွေ နေ့စဉ်တင်ရတဲ့ ဌာနတွေကို တာဝန်ပေးထားတာ (၂၀) လောက် ရှိပါတယ်။ ရှိသမျှ လုံးစေ့ပါတ်စေ့ အကုန်ရေးပြီး တင်ရတဲ့ အစီရင်ခံစာက တနေ့ ကို စာရွက်ရေ ၃ ပိသာ အထက်မှာရှိပါတယ်။ ရှိသမျှ ၀က်ဆိုဒ်တွေ၊ သတင်းဌာနတွေ ဒီဗွီဘီ၊ ဧရာဝတီ၊ မိုးသီးဇွန်၊ နစ်နေမန်း၊ ခေတ်ပြိုင် ရှိသမျှ အကုန်ဖတ်ဘို့၊ သတင်းတပ်ဖွဲ့ တွေတောင် တာဝန်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုရမ်တွေ ဘလောက်တွေကိုလည်း ဒီ အတိုင်းပါဘဲ”။
သေသေချာချာသာ ဖတ်ပြီး နားထောင်ပြီး ဘာမှ မချွင်းမချန် သတင်းဆက်ပို့ ပေးရင် နအဖဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေ သိရသလို ဒီလို စောင့်ဖတ် နားထောင်ပြီး သတင်းပေးပို့ ပေးနေရတဲ့သူတွေအတွက်လည်း ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း အသိအမြင်လေးတွေ ရတာပေါ့ဗျာ။ အသိအမြင်လေးတွေရတော့ လက်ရှိ နအဖဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေရဲ့အလိမ်အညာ မီဒီယာတွေနဲ့မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ ခွဲခြား သိမြင်နိုင်မှာပါ။
နအဖဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေရဲ့မတရား ထိန်းချူပ်မှုအောက်မှာ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း မဝေဖန်ရဲ မပြောရဲဘဲ ပြောခိုင်းသမျှ ရေးခိုင်းသမျှ ပြောဆိုရေးသားနေရတဲ့ သတင်းစာတွေ တီဗွီသတင်းတွေနဲ့ မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ရင်တွင်းက ခံစားပြောဆိုမှုတွေ လက်တွေ့ ကြုံတွေ့ ဖြစ်ပျက်နေမှုတွေကို တင်ပြဖေါ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ ပြည်သူ့ ဘက်က ရပ်တည်နေပေးနေတဲ့ သတင်းဌာနတွေ ရေဒီယိုတွေ ဘလော့တွေ ဖိုရမ်တွေက တင်ပြမှုတွေကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
နအဖဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေရဲ့လှည့်ဖြား လိမ်ညာ ဖုံးကွယ် တည်းဖြတ် ပြင်ဆင် ကန့် သတ် ချူပ်ချယ် ပယ်ဖျက် လိုတာသာ ဖေါ်ပြတဲ့ နအဖမီဒီယာရဲ့တင်ပြမှုတွေ မမှန်တာကို လက်တွေ့ သိချင်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ အသံတွေကို ဖေါ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ တင်ပြမှုတွေကို များများသာ ဖတ်ပါ နားထောင်ပါ။ ပြီးရင် ပြည်သူတွေရဲ့ပကတိ ဘ၀တွေကို သိအောင် ကိုယ်ကိုတိုင် တိတိကျကျ အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းကင်းနဲ့သွားရောက်လေ့လာပြီး နအဖရဲ့မိုးလုံးပြည့်မုသားတွေကို ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ကြပါလို့အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူများကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒါမှ အမှန် အမှားကို ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ကြမှာပါ။
ဘီဘီစီ၊ အာအက်အေ၊ ဗွီအိုအေ အစရှိတဲ့ သတင်းဌာနများ၊ ဒီဗွီဘီ၊ ဧရာဝတီ၊ မိုးသီးဇွန်၊ နစ်နေမန်း၊ ခေတ်ပြိုင် အစရှိတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာများ၊ ဖိုရမ်များ၊ ဘလော့များကို တာဝန်အရဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မိမိကိုယ်တိုင်နှစ်သက်လို့ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ရှူ နားထောင်တဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ပြန်လည် မျှဝေ ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ကိုညီညီအောင် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေ။ (AAPP သတင်း)
အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ကိုညီညီအောင် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေ။
ပြည်သူအပေါ် အနိုင်ကျင့် ရမ်းကားမှာလား စစ်ဗိုလ်ပေါက်စ အပေါင်းတို့ ။ အာဏာရှင်ကို ငုံ့ ခံမှာလား စစ်ဗိုလ်ပေါက်စ အပေါင်းတို့ ။
(သံကို သံဖျက် သံချေးတက်၏ ဆိုသကဲ့သို့ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် အပြောခံရရင် ပြောတဲ့သူထက် အဆိုပါ ငါးငုံးမကိုသာ ဖယ်ရှားပြီး ကျန်သူတွေ ငါးခုံးမလို မဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်)။
မန္တလေးမြို့ ၏ ဒီဇင်ဘာဆောင်းတွင်း၊ အချိန်ကာလသည် နေခင်းဘက်ဖြစ်သော်လည်း ရာသီဥတု အေးအေးလေးနင့် မြို့ နေလူထု သွားလာလှုပ်ရှားလျက်ရှိကြသည်။
နေ့ ခင်းဘက် အချိန်၊ မန္တလေး ကျူံးတောင်ဘက် (၂၆) လမ်းအတိုင်း သွားလာလျက်ရှိသောလူများသည် မကြာမှီအချိန်အတွင်း မင်းမဲ့စရိုက်နိင်သော အရုပ်ဆိုး အကြည်းတန်လှသည့် မြင်ကွင်းတစ်ခုကို မြင်ရလိမ့်မည်ဟု မည်သူကမှ ကြိုမထင်ထားခဲ့မိပေ။
မန္တလေးကျုံးအနောက် လမ်း (၈၀) မှ (၂၆) လမ်းအတိုင်း ကျုံးရေပြင်ကို ဖြတ်တိုက်လားသော လေအေးလေးများကို ရှူရှိုက်ရင်း ကျွန်တော် ဆိုင်ကယ်စီးလာခဲ့သည်။ (၇၃) လမ်းကို ကျော်အလာ ရှေ့ မှတွေ့ မြင်ရသော မြင်ကွင်းမှာကား ဘယ်လိုမှ မသင့်တော် အရုပ်ဆိုးလှပါသည်။
ပထမဆိုင်ကယ်တွင် သမီးရည်းစားသော်လည်းကောင်း အိမ်ထောင်သည်သော်လည်ကောင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ လူငယ်ကောင်လေးတစ်ဦးနင့် ကောင်မလေးတစ်ဦးတို့ ၏ အတွဲဆိုင်ကယ်ကို ဘေးမှယှဉ်၍ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြင့် လိုက်ယှဉ်စီးကာ နောက်ပြောင်နေသော ဒုတိယဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင် မနေ့ တစ်နေ့ ကမှ DSA ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းမှ သင်တန်းဆင်းလာသော ဗိုလ်ပေါက်စနစ်ယောက် ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံနင့် ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ် မဆောင်းထားတာ တွေ့ မြင်ရပါသည်။
ထို ဗိုလ်ပေါက်စ နှစ်ယောက်သည် မူးယစ်ရီဝေနေသောမျက်လုံးများဖြင့် အဆိုပါအတွဲ စီးလာသော ဆိုင်ကယ်နောက်မှ ကောင်မလေးကို အသည်းအသန် အလွန်အကျူး မတော်မရာ နောက်ပြောင်လျက်ရှိသည်။ အင်မတန်ကြည့်ရဆိုးပါသည်။ ကောင်မလေးတွင် သက်ဆိုင်သူ ရှေ့ မှပါနေသည်ကို သိသိကြီးနှင့် သိက္ခာတရား မစောင့်ထိန်း၊ လူမှုရေး မလိုက်နာ၊ ရိုင်းပြစော်ကားချက် ရှိနေပေသည်။
စည်းကမ်းရှိစွာ သွားလာနေသော ပြည်သူတွေကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ သောက်စားထားသော သူတို့ကိုယ်သူတို့ နောင်တစ်ခေတ်၏ ခေါင်းဆောင်များဟု မိမိဖာသာ ခံယူထားသူများက သက်သက်မဲ့ နောက်ယှက်နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
လက်လွယ်စပယ် နောက်မှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် တရားလွန် လိုက်လံနှောင့်ယှက် အစ ခံနေရသော ကောင်မလေးသည် ကြောက်ရွံကာ နေလေပြီ။ နောက်ဆုံးတွင် ဆိုင်ကယ်များကို ရပ်ကာ အတွဲကောင်ကလေးမှ သည်းခံနိုင်မှုထက် ကျော်လွန်နေသော လုပ်ရပ်ဖြစ်သောကြောင့် “မင်းတို့ လမ်းကို မင်းတို့ သွားရင် ကောင်းပါမယ်” ဟု ပြောရတော့သည်။
သို့ သော် ထို အပွင့်တစ်ပွင့်စီ ပုခုံးထက်မှာ ရှိနေသော ရိုင်းစိုင်းသူ ဗိုလ်ပေါက်စ နှစ်ဦးမှာ ပို၍ပင် ဆိုးလာပါတော့သည်။
“မင်းက ဘာကောင်လည်း၊ ချမလား” ဟု ရှေ့ မှ ဆိုင်ကယ်မောင်းသည့် ဗိုလ်ပေါက်စမှ နောက်မှထိုင်စီးသည့် ဗိုလ်ပေါက်စကို “ဟေ့ကောင် - အဲ့ဒီ ဆိုင်ကယ်နံပါတ် မှတ်စမ်း” ဟု ပြောလေသည်။
ဒီဆိုင်ကယ်နှစ်စီးလုံး၏ မြင်ကွင်းကို လမ်းတစ်လျှောက် နောက်မှ ခရီးသွားရင်း ပါလာနေသော ကျွန်တော်အနေဖြင့် ခံပြင်းမိပါသည်။စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဗရမ်းဗတာဖြစ်နေသော ဗိုလ်ပေါက်စများက အေးအေးဆေးဆေး သွားလာနေသော ပြည်သူများဖြစ်တဲ့ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတို့ ကို အရေးယူအုံးမတဲ့။
အဆိုပါ ဗိုလ်ပေါက်စနှစ်ယောက်မှာ အာဏာပါဝါတွေပြကာ ရှေ့ မှ ဆိုင်ကယ်နံပါတ်ကို မှတ်ဖို့ သာ လုပ်နေကြသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ ခဲ့ရသည့် မြင်ကွင်းစစ်စစ် ဖြစ်တော့သည်။
စစ်တက္ကသိုလ်ဟုဆိုသော သူတို့ ကျောင်းတော်ကြီးက ဘာတွေများ သင်ပေးလိုက်ပါသနည်း။ သူတို့ ရဲ့တပ်ချုပ်ကြီးက ဘာတွေများ မိန့် ခွန်းခြွေလိုက်သနည်း။ ဗိုလ်သင်တန်းတွင် သင်ကြားပေးလိုက်တာ အသိထည့်ပေးလိုက်တာက ဒီလို ပြည်သူတွေတွေကို မတရားအနိုင်ကျင့် နှောင့်ယှက် စော်ကား အာဏာပါဝါ့ ပြဖို့ပါလားဟု မေးချင်မိပါတယ်။
အဆိုပါ ရမ်းကားသူ ဗိုလ်ပေါက်စ နှစ်ယောက်သည် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မန္တလေး (၂၆) လမ်းနင့် (၆၆) လမ်းထောင့်မီးပွိုင့် ထိတိုင်အောင် မီးနီ စောင့်နေရင်းလည်း အတွဲဆိုင်ကယ်အား ဆက်လက် နောက်ယှက်နေကြပါသည်။ ထို ဗိုလ်ပေါက်စနှစ်ယောက်၏ မတရား နှောက်ယှက်နေမှုကို ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပင် မြင်တွေ့ နေကြပေမယ့် မီးပွိုင့်အနီးရှိ ယာဉ်ထိန်းရဲနားမှ စစ်သားများ ရဲများကလည်း မည်သို့ မျှ ၀င်ရောက်တားဆီးဖြင်း မရှိဘဲ ဒီအတိုင်း ကြည့်နေကြပါသည်။
ထိုသို့ဗိုလ်ပေါက်စနှစ်ဦး၏ ရမ်းကားမှုလုပ်ရပ်ကြောင့်၊ ရမ်းကားမှုအား မြင်တွေ့ နေပါလျက်နှင့် ၀င်ရောက်တားဆီးကာ တာဝန်အရ မဆောင်ရွက်ရဲသော လစ်လှူရှူနေကြသည့် စစ်သားများနှင့် ရဲများအား အမြင်ကပ်လာခြင်းတို့ ကြောင့် လမ်းဘေးမှ မြင်တွေ့ နေကြရသော ပြည်သူများမှာ မခံမရပ်နိင် ဖြစ်လာကြပါသည်။ နောက်ဆုံး ထို အတွဲဆိုင်ကယ် မန္တလေး (၆၅) လမ်းရှိ မုန့်ဆိုင်တွင်းသို့ဝင်ထိုင်တော့မှသာလျှင် ထို သကောင့်သား ဗိုလ်ပေါက်စ ရိုင်းစိုင်းသူများ မူးယစ်စွာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အော်ဟစ်ကာ ထွက်ခွာသွားပါတော့သည်။
ယခုဖြစ်ရပ်ကို ကြည့်မည်ဆိုပါက တစ်တိုင်းပြည်လုံးအတွက် ရင်လေးစရာ ဖြစ်ပါသည်။ ယာဉ်ထိန်းတဲအနီးမှ စစ်သားများ ရဲများသည်လည်း ပြည်သူကို ကာကွယ်ရန် မဟုတ်ပါ။ တပ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေ လုံခြုံရေးအတွက်သာ စောင့်ကြည့်နေချင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူကိုကာကွယ်ရန် လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း မျက်မြင် သက်သေပင် ဖြစ်ပါသည်။
စစ်ဝတ်စုံဝတ်ထားပါက ဥပဒေအထက်တွင် ရှိနေပြီဟု တပ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေမှ စကာ အောက်ခြေအဆင့် စစ်ဗိုလ် စစ်သား အများစုက ခံယူထားနေပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်အပေါ်သစ္စာရှိသော စစ်သားအနည်းစု (အတော့်ကို ရှားပါးလွန်းနေပါပြီ) မှ လွဲ၍ ထို့ သို့ ဖြစ်နေအောင်လည်း တပ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေက စ၍ ပြည်သူ့ အာဏာကို အလွှဲသုံးကာ ထိပ်ဆုံးမှ လုပ်ပြနေပါသည်။
တစ်တိုင်းပြည်လုံးအရေးထက် ကိုယ့်မိသားစုကောင်းစားရေး၊ မိသားစုနောက်ပိုင်းလုံးခြုံစွာနေနိင်ရေးတို့ သာ သန်းရွှေခေါင်းထဲတွင် ရှိပါသည်။ အခုထိလည်း မည်သူကိုမှ အာဏာ လွဲပေးဖို့ စိတ်မချသေးပါ။ တိုင်းပြည်ချစ်လွန်းလို့ တော့ မဟုတ်ပါ။ ရှေ့ မှ အာဏာရှင် နေ၀င်းလို နေ၀င်းမိသားစုတွေလို အဖြစ်ခံရမှာ တွေးကြောက်နေ၍သာ ဖြစ်သည်။
ရှေ့ တန်းမရောက်ခင် မြို့ ထဲမှာပင် မြို့ နေပြည်သူအပေါ် ဒီလောက် မိုက်ရိုင်းပြနေသော စစ်ဗိုလ်ပေါက်စများကို ကြည့်ရင် တောတောင်ထဲရှိ ရိုးသားသည့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများကို အဆိုပါ စစ်ဗိုလ်များက မည်မျှ မတရား အနိုင်ကျင့်မည်ကို တွေးကြည့်စရာတောင် မလိုလောက်အောင် ကျိန်းသေ ရမ်းကားကြမည်မှာ မလွဲပေ။
နအဖ၏ ကလိမ်ကကျစ်ကျကာ တစ်ဘက်သတ်အတည်ပြုခဲ့သော ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဖွဲ့ စည်းအုပ်ချူပ်ပုံ (အခြေခံ အောက်ခြေလူတန်းစား ပြည်သူတွေသာ ခံရမည့် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ) တွင် လွတ်တော်တွင် စစ်တပ်မှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ပါဦးမတည့်ဗျာ။ မည်သို့ ဖြစ်မည်ကို ပြည်သူများ မည်သို့ရမ်းကားခံရမည်ကို မတွေးဝံစရာပင် ဖြစ်ပါသည်။
သန်းရွှေမှ ယခုအချိန်ထိ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စာကိုလည်း မပြန်သေးပါ။ သန်းရွှေသည် တပ်မတော်ကိုလည်း ကုိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးချဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပါပြီ။
ပြည်သူကို ချစ်ပါသည်ဟု ဆိုဟန်ပြနေသော ဆိုပြနေသော ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းများ (တပ်မတော်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၊ ငှာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ ထိပ်ဆုံးမှ ပါသည့်) သူတို့လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားဖို့လိုပါပြီ။
သန်းရွှေ မိသားစုကောင်းစားရေးအတွက် အလုပ်ဆက်လုပ်နေတာလား။ ပြည်သူ့ အတွက် ဆက်လုပ်မှာလား။
ပြည်သူကို ချစ်သော မျိုးချစ်စစ်သားများ၊ ပြည်သူကို ချစ်သော ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ၊ ပြည်သူဝန်ထမ်းများ ပူပေါင်းပါဝင်မှသာလျှင် ဤ အာကာရူး သန်းရွှေနှင့် နအဖဗိုလ်ချူပ်တစ်စုကို အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ သော အာဏာပါဝါပြသည့် ရမ်းကားသော မတရားအနိုင်ကျင့်မှုများ ပျောက်ကွယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တရားဖြင့် တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်စေချင်ပါသည်။
ပြည်သူကို ရမ်းကားသော စစ်ဗိုလ်များရန်မှ ပြည်သူတိုင်း ကင်းဝေးကြပါစေ။
(ယခုဖေါ်ပြချက်အား စစ်တက္ကသိုလ်မှ ဗိုလ်လောင်းများ၊ ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းကာစသူများ၊ လောလောလတ်လတ် ဗိုလ်ဖြစ်နေသူများ ဖတ်ရှူ သိမြင်စေချင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးဟာ ယခုဖေါ်ပြတဲ့တစ်ခုထဲသာ ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်း နေရာဒေသမရွေးမှာ ဖြစ်ပျက်နေပါတယ်။ ဒီဖေါ်ပြချက်ပါ စစ်ဗိုလ်နှစ်ဦးရဲ့ရမ်းကားမှုလုပ်ရပ်ကြောင့် သိက္ခာကျဆင်းတယ်လို့မှတ်ယူရင် အဆိုပါ စစ်ဗိုလ်နှစ်ဦးကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရပ်ကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း အမှန်အတိုင်း သုံးသပ်မြင်တွေ့ ဖို လိုပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကို မြင်တွေ့ ကြသူ မည်သူမဆိုကတော့ ပြောပြ ဖေါ်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်)။
ဘူးသီးတောင်ထောင်ထဲရှိ အကျဉ်းသားများ ၏ ရိက္ခာများကို ထောင်အာဏာပိုင်များက ဖြတ်စားသဖြင့် အကျဉ်းသားများ အာဟာရ ချို့တဲ့မှုနှင့်ရင်ဆိုင်...။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင် ထောင်ထဲရှိ ထောင်သားများအတွက် ရိက္ခာကို ထောင်အာဏာပိုင်များက ဖြတ်စားပြီး အပြည့်အ၀ မကျွေးသဖြင့် ထောင်သားများမှာ အဟာရ ချို့တဲ့မူနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်ဟု ထောင်ထဲက လွှတ်မြှောက်လာသူ တဦးက ပြောသည်။
“ အရင်က ထောင်သား တဦးကို တပတ်မှာ အမဲသား ၅ ကျပ်သားစီ နှစ်ကြိမ် ကျွေးပါတယ်။ ခုတော့ ၅ ကျပ်သား ကျွေးရာကနေ ၂ ကျပ်သားဘဲ ကျွေးတော့တဲ့အတွက် ထောင်သား အများစုဟာ အဟာရ ချို့တဲ့မူနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ အမဲသား ၅ ကျပ်သား ကျွေးရာကနေ ၂ ကျပ်သားထိ လျော့ချ ကျွေးလာခြင်းမှာ ထောင်အာဏာပိုင်များ အသစ်ရောက်ရှိလာသည့် အချိန်မှ စတင်ခဲ့သည်ဟု သူက ပြောသည်။
“အရင် ထောင်ပိုင် စိန်ထွန်းတို့၊ ထောင်မှူး တင်ရွှေ လက်ထက်တွေမှာတော့ အစိုးရက သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ အတိုင်း တပတ်မှာ နှစ်ကြိမ်၊ တကြိမ်မှာ ထောင်သား တဦးကို အမဲသား ၅ ကျပ်သားစီ ကျွေးပါတယ်။ အခုအသစ်ရောက်လာတဲ့ ထောင်ပိုင် တင့်ဆွေ၊ ထောင်မှူး နေသူရထိုက် တို့က အမဲသား ၅ ကျပ်သား မကျွေးတော့ဘဲ ၂ ကျပ်သားဘဲ ကျွေးပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ထောင်သားတွေ အဟာရ ချို့တဲ့ လာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ယခုကဲ့သို့ အမဲသား ၅ ကျပ်သားမှ ၂ ကျပ်သားထိ လျှော့ချ ကျွေးခြင်းမှာ အစိုးရမှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းကို ချိုးဖေါက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ထောင်အာဏာပိုင်များ အနေဖြင့် ကိုယ်ကျိုးအတွက် အဆိုပါ ရိက္ခာငွေများမှ ပိုလျှံသောငွေများကို အသုံးပြုလို၍ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ ခုလို အဟာရ ပြည့်ဝအောင် မကျွေးတဲ့ အပြင် တဘက်မှာလည်းထောင်သားတွေကိုအလုပ်ကြမ်းစေခိုင်းတာတို့ ဘူးသီးတောင် ထောင်ထဲမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ ခုလို အလုပ်ကြမ်းစေခိုင်းတာကလည်း ထောင်အာဏာပိုင်တွေက်ို အကြီးအကျယ် ၀င်ငွေ ရစေတဲ့ အတွက် ထောင်သားတိုင်းကို အလုပ်ကြမ်း စေခိုင်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
အလုပ်ကြမ်း မလုပ်လိုသူ ထောင်သားများ အနေဖြင့် ထောင်အာဏာပိုင်များကို တနှစ်အတွက် ကျပ်ငွေ နှစ်သောင်းမှ တသိန်းထိ ပေးကြရသည်ဟု သူက ပြောသည်။
“ အလုပ်ကြမ်း မလုပ်ချင်ရင် ထောင်ထဲမှာ အာဏာရှိတဲ့ ထောင်မှူး နေသူရထိုက် နဲ့ ဒုတပ်ကြပ် သိန်းဝင်း ကို ပိုက်ဆံ သိန်းချီပြီးပေးရပါတယ်။ မပေးရင် နေ့တိုင်း တနေ့မှ မလွှတ်ဘဲ ထောင်ပြင်မှာ သွားပြီး အလုပ်ကြမ်း လုပ်ရပါတယ်။ မိသားစု ပိုက်ဆံရှိတဲ့ ထောင်သားတွေကတော့ အပြင်မှာ အလုပ် မလုပ်လိုတဲ့ အတွက် ထောင်အာဏာပိုင်တွေကို ပိုက်ဆံ ပေးကြပါတယ်။ ပိုက်ဆံမပေးနိုင်ရင်တော့ တနေ့ကုန် အပြင်သွားပြီး အလုပ်ကြမ်း စေခိုင်းခံရပါတယ်။”
၎င်းပြင် မိလ္လာ မသယ်လိုသူ ထောင်သားများ အနေဖြင့် ထောင်အာဏာပိုင်များကို တနှစ်ကို ကျပ်ငွေ ၃၀၀၀၀ မှ ၅၀၀၀၀ အထိ ပေးကြရပြီး အဆိုပါ ထောင်သားများထံမှ ခေါင်းပုံဖြတ် ရရှိသောငွေကို ထောင်ပိုင် တင့်ဆွေ၊ ထောင်မှူးကြီး ကြည်ဦး၊ ထောင်မှူး နေသူရထိုက်နှင့် စစ်တပ်မှ ပြောင်းရွှေ့လာသူ ဒု တပ်ကြပ် သိန်းဝင်း တို့မှ ခွဲဝေယူကြသည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာပြည်တွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုတော့မည့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံများ နှင့် ဆေးကုသရေးနယ်ပယ်မှ သတင်းများ.။
(မကြာခင်အထူးကုဆေးရုံအဖြစ်ပြောင်းလဲတော့ မည့် အာရှတော်ဝင်အထူးကုဆေးခန်း)
၂၀၀၇ ခုနှစ် ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးဥပဒေ အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံဆေးခန်းများ တရားဝင် လုပ်ကိုင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ရာ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင် လိုသူများသည် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန တွင် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိမ်ဖြူလမ်းရှိ ရန်ကုန်တိုင်း ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန တွင် ကြေငြာထားသည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန မှ ထုတ်ပေးထားသည့် လိုင်စင်မရှိဘဲ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်ပါက ၂၀၀၇ ခုနှစ် ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ် နှင့် ငွေဒဏ် နှစ်ရပ်လုံးကျ ခံနိုင်ကြောင်း ထိုကြေခြာချက် တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ထိုဥပဒေ စတင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးသူပေါ့လျှော့မှု ကြောင့် လူနာ ကိုယ်လက် အင်္ဂါ ချို့ ယွင်းခဲ့ခြင်း (သို့ မဟုတ်) အသက်အန္တရယ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု များဖြစ်ပေါ်လျှင် လူနာရှင် အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်း များကို တရားစွဲဆို ခွင့်ရရှိမည် ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
ယခုလက်ရှိ ကျင့်ထုံးများအရ ဆေးရုံး၊ဆေးခန်းများ၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် လူနာရှင် တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော် တရားမနစ်နာမှု ဥပဒေ (Law of Tort) နှင့် ပင် တရားစွဲ၍ မရသေးဟု ဥပဒေအကျိုးဆောင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန မှ စီစစ်ပြီး တရားဝင် ခွင့်ပြုမည့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံဆေးခန်းများသည် လက်ရှိ အခွန်ငွေထက် ခြောက်ဆ မက ပေးရနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်းမြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးတက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာဝန်
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင် အထူးကုဆေးခန်း တွင် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ က ခွဲစိတ်ကုသခံရစဉ် ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည် ဖြစ်ရပ်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အများလက်ခံလာရန် ကြိုးပမ်းသည့် ဖြစ်ရပ်များမှ တစ်ခုသာ
ဖြစ်ကြောင်းနာမည် ကျော် ဆရာဝန် တစ်ဦးက Freedom News Group သို့ ပြောသည်။သူက “ဒီ Law မရှိသေးလို့ ဒီလိုတွေ ဖြစ်တယ်လေ ဘယ်လောက်….ရင်နာစရာကောင်းလည်း ၊ဒီလော ဖြစ်လာရင် ဒီလို မဖြစ်တော့ဘူး ပေါ့တအားညက်တဲ့ ၀ါဒဖြန့် ချိရေး ပေါ့ဗျာ ”ဟုပြောသည်။
နာမည်ကျော် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ်ဦးကလည်း လတ်တလော ဆေးပညာနယ်မှ သတင်းများနှင့်
ပတ်သက်၍ ကျွန်တော် ဒေါက်တာကြည်စိုး နဲ့ သိလည်းမသိပါဘူး ရင်းလည်းမရင်းနှီးပါဘူး ၊ဆာဂျင်
အချင်းချင်း မို့ အဲဒီဆရာကို ဖာထေးပြောတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ တကယ်က First Test Health
Cleansing ဆရာဝန်မှာ ပဲတာဝန်ရှိတာ သူ့ တာဝန်မှာကရောဂါ ရှာဖွေရေး မပါဘူး ၊တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ခွဲစိတ်ကုသမယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ရော၊လူနာရောနှစ်ယောက်စလုံးလက်မှတ်ထိုးရတာဒီမှာကလူနာရှင်
တစ်ယောက်တည်းပဲသဘောတူပါကြောင်း……ဒီတစ်ခုတည်း………တခြားနိုင်ငံတွေမှာ က ခွဲစိတ် ပေးမယ့်သူကလည်း အောင်အောင်မြင်မြင် ခွဲစိတ်ကုသပေးဖို့ ၊တတ်စွမ်းသမျှကို အင်တိုက်အား
တိုက်ပြုလုပ်ပေး ဖို့ သဘောတူပါကြောင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်မှတ်ထိုးရတယ် ဒီမှာ ကတစ်ခုခု
ဆိုလူနာက ခံ ပေါ့ဗျာ “ဟု သူသိရှိနား လည်ထားပုံ ကို ပြောသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် က စစ်ထောက်လှမ်းရေး တပ်မှ အငြိ်မ်းစားပေးခံရသည့် တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးက “ကျွန်တော် ကကထောက်မှာ ဆေးရုံတွေမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း သေတဲ့သတင်းတွေ ၊ ထူးခြားတဲ့ အဖြစ်အပျက် (သဘာဝ တရား) တွေ နဲ့ မင်းသား မင်းသမီးတွေ ရဲ့ အတွင်းရေးတွေ နဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေကို သတင်းစုံစမ်းရတယ် ၊
တကယ်လို့ အထက်ကနေ တစ်ခုခုကို ဘလက်အောက် လုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားလာရင် လက်ရှိမှာ ဟော့ဖြစ်ပြီး
လူတွေ စိတ်ဝင် စားမယ့် ကိစ္စ တစ်ခု ကို ပရိုပါ လုပ်လိုက်ရတော့ တာပဲ လူထူကလည်း အဲဒီသတင်းကြားမှာ နစ်နေရင် အစိုးရက အရေးပါတဲ့ ဒါမှမဟုတ် သတင်းမပေါက်ကြားစေလိုတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုခုကိုစီစဉ်လိုက်တော့
တာပဲ ဟု ”သူ၏ အတွေ့ အကြုံကို ပြောသည်။
၂၀၁၀ခုနှစ် တွင် တရားဝင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိမည့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံများသည် အထူးကုဆေးရုံအင်္ဂါရပ် နှင့် လျှော်ညီသည့် ဆေးရုံများကို လိုင်စင်ပေးမည် ဟု ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ရန်ကုန် မြို့ တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် စာရင်းများအရ အထူးကုဆေးရုံ ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ စစ်အုပ်စု ၀င်များ၏ အကျိုးစီးပွားများသာ ဖြစ်သည်။
မဲဆောက်မြို့ ထိုင်းဘုရင်၏မွေးနေ့တွင်နာမည်ကြီး အဆိုတော်များ ရောက်မလာသည့် အတွက် မြန်မာပရိသတ်နှင့် စီစဉ်သူများ ပြသနာဖြစ်။
ပေးပို့ ပေးသူ မဲဆောက်နတ်ဆိုး အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, December 07, 2009
ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်၏ ရွှေရတုမွေးနေ့ အခမ်းအနား မယ် တော်ဆေးခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်(ဓာတ်ပုံ)
The Voice 6-5 Final
ပေးပို့ ပေးသော ဒီမိုဝေယံအားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
လွှတ်ရက်စေ့ မြန်မာ့ အကျဉ်းသား ၄၇ ဦး ပြည်တော် မပြန်နိုင်...။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ထောင်ထဲတွင် လွှတ်ရက်စေ့သော်လည်း မြန်မာ စစ်အစိုးရမှ လက်မခံသဖြင့် ပြည်တော်မပြန်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေသည့် မြန်မာ့ အကျဉ်းသား ၄၇ ဦးရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
“သူတို့က မြန်မာပြည်ကို ပြန်ဖို့ စောင့်မျှော်နေတာ ကြာပါပြီ။ မြန်မာဘက်က သူတို့အတွက် တုန့်ပြန်မူ ဘာမှ မလုပ်တော့ လွှတ်ရက်စေ့ပေမယ့် ပြည်တော် မပြန်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေကြရတယ်။ သူတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပို့နိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ စီစဉ်နေပါတယ်” ဟု သက်ဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလာ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ မြန်မာထောင်သားများမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ရှိ ထောင်အသီးသီးတွင် ရှိနေပြီး တချို့မှာ မြန်မာ စစ်အစိုးရမှ လက်မခံသဖြင့် သုံးနှစ်မှ ငါးနှစ်အထိ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ထောင်များတွင် နေထိုင်လျှက် ရှိနေကြသည်။
အမည် မဖေါ်လိုသူ မောင်တောမြို့ မြန်မာ လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေး ဌာနမှ စာရေး တဦးက “လွှတ်ရက်စေ့ထောင်သား အများစုကို မြန်မာဘက်က လက်ခံခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ အဓိကတော့ သူတို့ရဲ့ နေရပ်လိပ်စာတွေ မှန်ရမယ်။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသက ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ အထောက်အထားတွေ ပြနိုင်ရင် မြန်မာဘက်က လက်ခံခဲ့တာများပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ အထောက်အထား မပြနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ လက်ခံဖို့ မြန်မာဘက်က ငြင်းဆိုခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း သက်သေ အထောက်အထား မပြနိုင်သူ အများစုမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ၀င်ရောက်လာသော မူဆလင်များ ဖြစ်သည်ဟု သတင်း တရပ်တွင် ဖေါ်ပြသည်။
ယခုလာမည့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ဘီဒီအာရ် တပ်မှူး၏ မြန်မာ့ ခရီးစဉ်အတွင်း အဆိုပါ လွှတ်ရက်စေ့ ထောင်သား (၄၇) ဦးကို ပြန်လည် လက်ခံရေးအတွက် မြန်မာ့ စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများကို တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘီဒီအာရ် သတင်းရပ်ကွက်ကို ကိုးကားပြီး ဘင်္ဂလာနိုင်ငံမှ ထုတ် သတင်းစာများတွင် ဖေါ်ပြသည်။
အဆိုပါ လွှတ်ရက်စေ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၇ ဦးမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သိ်ု့ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာစဉ် ဖမ်းဆီးခံရသူများ ဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ တရားစွဲဆို ထောင်ချခံရပြီးနောက် ပြန်လည် လွှတ်မြှောက်နေသည့် ထောင်သားများ ဖြစ်သည်ဟု ဘင်္ဂလာ အာဏာပိုင်များက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ ထောင်အသီးသီးတွင် အနည်းဆုံး မြန်မာနိုင်ငံသား ၅၀၀ နီးပါးခန့် ဆက်လက် ကျန်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာရာမှ ဖမ်းဆီးခံရသူများ ဖြစ်သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, December 06, 2009
ပေးပို့ ပေးသော ဒီမိုဝေယံ အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ ရခိုင်ပြည်သူများအတွက် မဟုတ်ပါ..။
မြန်မာ နအဖ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းမှ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လျှပ်စစ် ဓါတ်အား သုံးစွဲမူ ပမာဏသည် ၃၀ မဂ္ဂါဝပ်သာရှိသဖြင့် ထုတ်ယူုရရှိသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများကို တခြား ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများသို့ ဖြန့်ဖြူးသွားမည် ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားကြောင်း The Voice ဂျာနယ် သတင်း တပုဒ်အရ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ပြောကြားချက်ကို ၀န်ကြီး ဇော်မင်းမှ နိုဝင်္ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပခုက္ကူ- ကျွန်းချောင်း ရထားလမ်းပိုင်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ဧည့်သည်တော် အဖြစ် တက်ရောက်စဉ် ပြည်တွင်း သတင်းထောက်များသို့ ပြောကြားသည်ဟု အဆိုပါ သတင်းတွင် ဖေါ်ပြပါသည်။
အဆိုပါ ၀န်ကြီးဇော်မင်း ပြောကြားချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မီးဘက်ဆိုင်ရာ စစ်တွေမှ ကျွမ်းကျင်သူ တဦးကို စုံစမ်း မေးမြန်းကြည့်ရာ သူက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ အခုလောလောဆယ်မှာ စစ်တွေ အပါအ၀င် ရခိုင် တပြည်နယ်လုံးမှာ လျှပ်စစ်မီးက မဂ္ဂါဝပ် ၃၀ ခန့် သုံးပါတယ်။ အခုလို မဂ္ဂါဝပ် ၃၀ သာသုံးပြီး ကျန်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားတွေကိ်ု တခြားပြည်နယ်တွေကို ဖြန့်ဖြူးမယ်ဆိုရင်တော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လျှပ်စစ်မီး ရရှိ်ရေးဟာ ဘာမှ တိုးတက်လာစရာ မရှိပါ။ ရခိုင်တပြည်နယ်လုံး တောရော မြို့ပါ လျှပ်စစ်မီး မဂ္ဂါဝပ် အနည်းဆုံး ၂၀၀ ခန့် လိုပါလိမ့်မယ်။ ခုလို ၀န်ကြီး ဇော်မင်း ပြောတဲ့ အတိုင်းသာ ရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၃၀ မဂ္ဂါဝပ်သာ သုံးပြီး ကျန်တာတွေကို ဗမာပြည်မဘက်ကို ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား သုံးစွဲမူဟာ အခုအတိုင်းအတာဘဲ ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး မြို့တွေမှာ တနေ့ကို ၃ နာရီ ရတာက လွဲပြီးဘာမှ ထူးခြားလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။”
အဆိုပါ လျှပ်စစ်မီး ၃၀ မဂ္ဂါဝပ် ပမာဏနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဌာနမှ အငြိမ်းစား ၀န်ထမ်း တဦးဖြစ်သူ ဦးမောင်ရီအား မေးကြည့်ရာ သူကယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ ကော့ဘဇားမြို့ တခုတည်းမှာတောင် ၄၆ မဂ္ဂါဝပ်ထိ အသုံး ပြုရပါတယ်။ ဒီမှာတော့ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေ အများကြီးရှိတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင် တပြည်နယ်လုံး အတွက် ဆိုရင်တော့ မဂ္ဂါဝပ် ၂၀၀ ကျော်ထိ လိုပါလိမ့်မယ်။ စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ၊ ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တော အကုန်လုံး အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးကို လုံးဝ အရေးမစိုက် ပစ်ပယ်ထားရာမှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှစ်ခုကို စတင်အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် သံတွဲ သူဌေးချောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘူးသီးတောင် စိုင်းတင် စီမံကိန်းများ ပါဝင်သည်။
စစ်အစိုးရ၏ ခန့်မှန်းချက် အရ သူဌေးချောင်းရေအား လျှပ်စစ်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၁၁၁ ထုတ်လုပ်နိ်ုင်မည် ဖြစ်ပြီး စိုင်းတင်မှ မဂ္ဂါဝပ် ၇၆ ထုတ်လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်း (၂) ခုအပါအ၀င် လေးမြို့မြစ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်သည်ဟု ၀န်ကြီး ဇော်မင်းမှ ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် အခွင့်အလန်း များစွာ ရှိသော်လည်း လျှပ်စစ်မီး တနေ့ကို ၂ နာရီနှင့် ၃ နာရီအကြားသာ ရရှိသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ အနည်းဆုံး ပြည်နယ် တခုဖြစ်ပြီး ယခုဆောက်လုပ်နေသော ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများမှာလည်း ရခိုင်ပြည်သူများ အတွက် မဟုတ်သဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာ လမ်းစပင် မမြင်ရသေးဘဲ ဖြစ်နေကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်သူများက ပြောသည်။
ထိုင်းဘုရင် ဘူမိဘော အဒူယာဒတ် ၏ (၈၂)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်..။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ရေသားတဲ့ နော...
နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုနှင့် ၁၉၉၁ ကျောင်းသား လှုပ်ရှ...
ဂျပန်နိုင်ငံ (UN)ရုံးရှေ့မှာပြုလုပ်သည့် ကမ္ဘာ့လူ့အခ...
Updated Information About Nyi Nyi Aung 's Hunger S...
အောင်မြင်သော်အဆိုတော်မျိုးကြီး မဖြစ်ခင်က သူရဲ့ တချ...
ဒလိုင်းလားမား နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် နိုင်...
အမှတ်တမဲ့မှ... အချိန်တိုအတွင်း တစ်ဘ၀ဒုက္ခိတ ဖြစ်သွာ...
နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ သဝဏ်လွှာ (Joint Stat...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမှာ ပြုလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးမျာ...
အထိန်းသိမ်းခံနေရသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်...
လူ့အသိုင်းအဝန်း မှာ လူသားတွေ အတွက် အလိုအပ်ဆုံး အရာ...
ကိုပင်ဟေဂင် ခရီးစဉ် သွားမည့် ဦးသိန်းစိန် ကျိုင်းတ...
ဒိန်းမတ်ရောက် မြန်မာဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ဆန္နပြ...
မြန်မာပြည်သို့ မြဝတီ တံတားမှ တဆင့် လိုင်စင်မဲ့ တင်...
များများ ဖတ်ပါ၊ များများ နားထောင်ပါ။ ပြီးရင် သေသေခ...
အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ကိုညီညီအောင် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေ။ ...
ပြည်သူအပေါ် အနိုင်ကျင့် ရမ်းကားမှာလား စစ်ဗိုလ်ပေါက်...
ဘူးသီးတောင်ထောင်ထဲရှိ အကျဉ်းသားများ ၏ ရိက္ခာများကို...
မြန်မာပြည်တွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုတော့မည့် ပုဂ္ဂလိက ဆေး...
မဲဆောက်မြို့ ထိုင်းဘုရင်၏မွေးနေ့တွင်နာမည်ကြီး အဆို...
ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်၏ ရွှေရတုမွေးနေ့ အခမ်းအနား မယ် ...
လွှတ်ရက်စေ့ မြန်မာ့ အကျဉ်းသား ၄၇ ဦး ပြည်တော် မပြန်...
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ ရခိုင်...
ထိုင်းဘုရင် ဘူမိဘော အဒူယာဒတ် ၏ (၈၂)နှစ်မြောက် မွေး...